जिम्मेवार वयस्क कोर्स | बच्चाहरूसँग काम गर्नेका लागि अनलाइन प्रमाणीकरण कार्यक्रम
जिम्मेवार वयस्क कोर्स
बच्चाहरूसँग काम गर्नेका लागि अनलाइन प्रमाणीकरण कार्यक्रम
यो 20 घण्टा अनलाइन प्रशिक्षणले रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई लाइसेंस प्राप्त बच्चा हेरचाह सुविधा सुविधाहरू वा ई.पू.मा स्कूलहरूमा बच्चाहरूसँग काम गर्नका लागि आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ।
अन्तर्क्रियात्मक सत्रहरू मार्फत, अनलाइन जिम्मेवार वयस्क पाठ्यक्रमले बच्चाको जन्मबाट 12 वर्ष उमेर, बच्चा सम्म बच्चाको विकासको बारेमा आधारभूत अवधारणाहरू समेट्छ। मार्गदर्शन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषण।
ब्रिटिश कोलम्बिया सरकारले अब बच्चाहरूसँग काम गर्ने सबै व्यक्तिहरूको लागि जिम्मेवार वयस्क कोर्स प्रशिक्षण अनिवार्य गरेको छ।
यो अनलाइन जिम्मेवार वयस्क कोर्स पूरा गर्दछ BC बाल देखभाल इजाजतपत्र ऐन व्यक्तिसँग कम्तिमा 20 घण्टा बच्चा हेरचाह प्रशिक्षणको लागि सुरक्षा, बाल विकास र पोषण सहित बच्चाहरूसँग काम गर्नको लागि आवश्यकताहरू।
हाम्रो जिम्मेवार वयस्क कोर्स अनलाइन प्रशिक्षणले बच्चाहरूसँग काम गर्नका लागि आवश्यक अनुभव प्राप्त गर्न बीसीमा रोजगार खोज्नेहरूलाई योग्य बनाउँछ। सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो छ कि पाठ्यक्रम स्वयं गति छ। विद्यार्थीहरूले कोर्स सुरु गर्न सक्दछन् जब यो उनीहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ, र तिनीहरू तयार भए पछि पूरा हुन्छन्। त्यहाँ कुनै समय सीमा छैन।
भुक्तानी भएपछि, विद्यार्थीहरूले लगईन निर्देशनहरूको साथ स्वागत ईमेल प्राप्त गर्दछन्। विद्यार्थीले पाठमा सुरू गर्न ईमेलमा लिंक क्लिक गर्न सक्दछन्। त्यहाँ पाठ्यक्रम भर अभ्यास क्विज, र अन्त मा एक बहु विकल्प अन्तिम परीक्षा छन्। पाठ्यक्रम का सबै अंश अनलाइन पूरा भयो, र त्यहाँ कुनै अतिरिक्त वर्कबुक आवश्यक छैन।
अन्तिम परीक्षा पूरा गरेपछि, विद्यार्थीहरूलाई पूर्णताको प्रमाणपत्र ईमेल गरिनेछ, जुन इजाजत प्राप्त बच्चा हेरचाह सुविधाहरूमा रोजगार प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाम्रो अनलाइन जिम्मेवार वयस्क कोर्स पनि वर्कबीसी द्वारा प्रायोजित हो। यसको मतलब यो कोर्स लिनका लागि स्थानीय रोजगार केन्द्रहरू मार्फत सरकारी कोष उपलब्ध हुन सक्छ। आवेदकहरू सक्रिय रोजगार खोज्नेहरू र उनीहरूको स्थानीय रोजगार केन्द्रको ग्राहक हुन आवेदन दिन आवश्यक छ। हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् सरकारी कोष थप विवरणहरूको लागि पृष्ठ।
जिम्मेवार वयस्क कोर्स उपलब्ध छ
100 भन्दा बढी भाषाहरूमा
तपाईंको छनोटको भाषामा अनलाइन जिम्मेवार वयस्क पाठ्यक्रम लिनुहोस्!
गुगल क्रोम ब्राउजर प्रयोग गर्नुहोस्,
र सुन्तला अनुवाद बटन मा क्लिक गर्नुहोस्
कुनै पनि पृष्ठको शीर्षमा।
तपाईको मनपर्ने भाषामा तपाईले अनलाइन पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको भाषामा पाठ्यक्रम अवलोकन गर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्
जिम्मेवार वयस्क कोर्स भिडियो
रोक्सान्ने पेनर पोवेल नदी, ई.पू.मा 4Pillar प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्रको मालिक हुन्।
उनी एक इजाजत प्राप्त अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, कार्यशाला सहजकर्ता र ईसीई प्रशिक्षक हुन्।
उनी पारिवारिक कोचको रूपमा पनि काम गर्दछिन र 17 वर्ष भन्दा बढी उमेरका लागि बालबालिका र परिवारहरूको मन्त्रालय मार्फत पालक अभिभावकको रूपमा सक्रिय छिन्।
रोक्सान्ले 10 वर्ष भन्दा बढी ब्यक्तिगत वर्कशपहरूको माध्यमबाट जिम्मेवार वयस्क कोर्सका लागि सीपहरू सिकाइरहेका छन्।
अब यो कोर्स अनलाइन उपलब्ध छ जसको तालिका वा स्थानले व्यक्तिगत रूपमा प्रशिक्षण लिन अनुमति दिदैन।
हाम्रो जिम्मेवार वयस्क पाठ्यक्रम मिनी क्विजको साथ पाठको श्रृंखलामा अनलाइन लिइएको छ। पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा स्वयं-गति छ। विद्यार्थीहरू कुनै पनि समयमा सुरू गर्न सक्दछन्, र अन्तिम तयार जब तिनीहरू तयार हुन्छन्। पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, विद्यार्थीहरूले एक अनलाइन खुला पुस्तक अन्तिम परीक्षा लिने छन्, र ईमेल पूरा हुने प्रमाणपत्र। पासिंग मार्क्स 70% हो, र पासिंग स्कोर प्राप्त नभएसम्म परीक्षा पुन: लिनको लागि उपलब्ध हुन्छ।
सहभागीहरूले कम्तिमा 19 बर्ष उमेरको हुनुपर्दछ, दर्ता गर्न, सबै पाठहरू पूरा गर्न र अन्तिम परीक्षालाई सन्तुष्टिको साथ उत्तीर्ण गर्न जिम्मेवार वयस्क कोर्स प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न।
कृपया नोट गर्नुहोस्, प्रशिक्षक Roxanne Penner ले तपाईलाई ईमेल द्वारा उपलब्ध गराउँदछ तपाईको पाठ्यक्रमको बखत कुनै प्रश्नको उत्तर दिनको लागि।
अनलाइन कोर्स प्रशंसापत्र
जिम्मेवार वयस्क कोर्स पाठ्यक्रम
अनलाइन जिम्मेवार वयस्क कोर्स भर्ना गर्न एकदम सरल थियो र पूरा गर्न! पाठ्यक्रम समाप्त गर्न को लागी शुरू बाट धेरै जानकारीमूलक र साथ पछ्याउन को लागी सरल छ।
एक प्रशिक्षकको रूपमा Roxanne महान भएको छ! उनी मेरा ईमेलहरूमा छिटो फर्किइन् र मसँग मेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिन सधै उपलब्ध थियो।
मलाई के पाठ्यक्रम को बारे मा अधिक मन पर्छ यो गहिराई मा थियो थियो। यसले विभिन्न स्वास्थ्य आवश्यकता भएका बच्चाहरूसँग कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा पनि जान्छ जुन मलाई लाग्छ कि जो कोही पनि मैदानमा जानको लागि महत्वपूर्ण छ।
जिम्मेवार वयस्क कोर्स समाप्त गरेपछि र परीक्षा दिए पछि मलाई विश्वास छ म आफ्नो नयाँ काममा प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछु कसरी अझ राम्रोसँग बुझ्ने जिम्मेवार वयस्क हुन।
जिम्मेवार वयस्क कोर्स पूरा गरे पछि विद्यार्थीको साथ काम गर्न योग्य हुन्छ:
स्कूल उमेर समूह बाल देखभाल (लाइसेन्स)
आवधिक बाल देखभाल सुविधा (इजाजतपत्र)
एक प्रतिस्थापन वा एक विकल्प / अनौपचारिक रूपमा लाइसेन्स समूह बाल हेरचाह केन्द्रहरू वा पूर्वस्कूलहरूमा प्रारम्भिक बचपन शिक्षा सहायकहरूको कलमा
आरामदायक परिवार ड्रप-इन कार्यक्रमहरू, परिवार बाल हेरचाह सहायक वा अन्य सम्बन्धित स्थानहरू
एक परिवार दिन हेरचाह केन्द्र शुरू गर्दै
Nanny वा Babysitting
अब सुरू गर्नुहोस्!
अनलाइन कोर्स - 125
4Pillar प्रारम्भिक शिक्षा हाम्रो अनलाइन जिम्मेवार वयस्क कोर्समा 100% सन्तुष्टि ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्व गर्न गर्व छ।
यदि कुनै कारणवश तपाईं प्रशिक्षणसँग खुसी हुनुहुन्न भने, हामी तपाईंको खरीदको लागि तपाईंलाई पूर्ण फिर्ता गर्नेछौं।
कृपया नोट गर्नुहोस्, पूरा हुने प्रमाणपत्र फिर्ती कोर्सहरूको लागि जारी गरिने छैन।
थप विद्यार्थी प्रशंसापत्र
म अत्यधिक जिम्मेवार वयस्क कोर्सको प्रशिक्षकको रूपमा रोक्सन पेनरलाई सिफारिस गर्दछु।
उनी धेरै राम्रा र भावुक प्रशिक्षक हुन् जसले स्पष्ट रूपमा उनी काम गर्ने क्षेत्रको आनन्द लिउँछिन्। उनीसँग सम्बन्धित हुन पाउँदा खुसीको कुरा थियो।
मैले जिम्मेवार वयस्क कोर्स लिएँ र यो धेरै जानकारीपूर्ण फेला पारे। रोक्सान् पेनरले कक्षालाई रमाईलो बनायो र उनको शिक्षण शैलीको माध्यमबाट सिक्नु एक हावा थियो।
म यस कोर्स को लागी साइन अप गर्न अत्यधिक सिफारिस गर्दछु
चेरिल आर पावेल
जिम्मेवार वयस्क अनलाइन कोर्स एक अद्भुत सीख्ने अनुभव थियो। मलाई मन पर्यो कि बाटोमा मैले गरेका कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन रोक्सान उपलब्ध थिए।
मैले पाठ्यक्रम पूरा गरे पछि मेरो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो, जुन बच्चाको हेरचाह जागिरको लागि मेरो आवेदनको समयमा सहयोगी थियो।